मिस वर्ल्ड जित्नबाट श्रृङ्खला कति टाढा छिन् ? - Dainik Nepal
मिस वर्ल्ड जित्नबाट श्रृङ्खला कति टाढा छिन् ?
दैनिक नेपाल २०७५ मंसिर १८ गते ११:५५
काठमाडौं । ‘हजुुरहरूको मायाको लागि, थ्यांक्यु सो मच, खुुशीले रुँदा रुँदा आँखा सुनिन लागि सक्यो’, मिस वर्ल्डको स्पर्धामा पुगेकी मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले मल्टिमिडया अवार्ड र ब्युटी विथ पर्पस जितेपछि मध्यरातमा फेसबुकमा भिडियो अपलोड गर्दै भनेकी छन् ।
हेड टु हेडमा सिंगापुरकी सुन्दरीसँग पराजित हुँदा उनका आँखामा निराशाको आँसु टिलपिल थियो । तर, अन्तिम ३० मा पुग्दै उनले दुुई वटा अवार्ड हात पार्दा खुशीका आँसु छचल्किएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।
उनी अब मिस वर्ल्डको अन्तिम ३० मा पुगेकी छन् । यो ताज चुम्नका लागि तीन स्टेप पार गर्नुपर्ने पडाव हो । र, विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा नेपाल पहिलो पटक पुगेको स्थान पनि हो । श्रृङ्खला अब मिस वर्ल्डको ताज भन्दा धेरै टाढा छैनन् । तर, चुनौति धेरै छन् । अब मतको होइन, उनको व्यक्तिगत अभिमत मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ । साथै सुुन्दरी प्रतियोगितामा अन्तिम १५ र अन्तिम ५ सहित विश्व सुन्दरीको ताजसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता ।
अब अन्तिम ३० को अन्तिम लिस्ट तयार भएपछि विभिन्न समूहमा विभाजित गरी आयोजकले अन्तिम १५ को छनौट गर्छ । श्रृङ्खलाले अन्तिम १५ का लागि मिहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, सो अन्तिम १५ का प्रतियोगीबाट अन्तिम ५ छनौट भई तिनैबाट मिस वर्ल्डको घोषणा हुनेछ ।
हेड टु हेडमा पराजित भए पनि श्रृङ्खला स्वयंले भने आशा जीवित राखेकी थिइन् । उनले उक्त पराजयपछि सालिन, भावुक मुद्रामा अझै पनि मौका रहेका कारणले निराश नहुनका लागि नेपालीलाई सन्देश छाडेकी थिइन् । अहिलेसम्मका सुन्दरी मध्येमा श्रृङ्खलाको यो शालिन सन्देशले नै नेपालीलाई उत्साही बनाएको छ ।
उनकी आमा प्रदेश ३ की नेकपा सांसद मुनु सिग्देलले छोरीले विश्व सुन्दरीको ताज जित्ने आशा राखेकी छन् । अफगानिस्तानमा खटिरहेका नेपालका छोराहरू गोर्खा सैनिक सदस्यले पनि श्रृङ्खलाको जितका लागि सन्देश जारी गरेका थिए । उनीहरूले शुभकामना पनि दिएका थिए ।